Contents for Java Beginner — MYSTERY ZILLION
Contents for Java Beginner
October 2011 edited October 2011 in Java
Java Beginner တယောက်အနေနဲ့ Java ကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင် ဘယ်ကနေစပြီး လေ့လာသင့်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကို ခေါင်းစဉ်အစဉ်လိုက်လေးစုပေးစေလိုပါတယ်။
Intro မှာ operators ,data types, identifiers, constants, variables တွေကနေစသိခဲ့ပြီး
Control Flows တွေအကြောင်း၊ Arrays တွေအကြောင်းလေ့လာခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်
Access Modifiers တွေအကြောင်းလေ့လာတဲ့အခါမှာ ကြားထဲမှာအဆက်ပြတ်နေသလိုဖြစ်နေလို့ပါ။
step by step လေ့လာဖို့ဆိုရင် လွယ်ကူအောင် Guide lines လေးချပေးကြည့်ပေးကြပါလို့..
ဘယ်လိုအဆက် ပြတ်နေတာကို မေးတာလဲ မေးထားတာကို သိပ်နားမလည်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။
Access Modifiers တွေကိုလေ့လာတော့ ကြားထဲမှာသိဖို့လိုနေသေးတယ်လို့ထင်လို့ပါ။
Class , Object , Constructor တွေအကြောင်းသိပ်နားမလည်သေးတာကော. member တွေကို access လုပ်တာကို သေချာနားမလည်ဘူးဖြစ်နေလို့ပါ။package တွေအကြောင်းသိမှ access လုပ်တာတွေကိုပြောမှ အဆင်ပြေနိုင်တာလား .စသဖြင့်ပေါ့နော်.။အခြေခံကနေတဖြည်းဖြည်းချငး် တဆင့်ချင်းတက်ပြီး လေ့လာသွားရင်ပိုအဆင်ပြေနိုင်မယ်ထင်လို့ပါ။ဒါပေမဲ့. လေ့လာရမယ့်ခေါင်းစဉ်တွေကို အစဉ်လိုက်မစီတတ်ဘူးဖြစ်နေလို့ပါ။Inheritance တွေကိုသိဖို့ဆို ဘာတွေကိုအရင်သိထားဖို့လိုအပ်သေးလဲ.နောက်ပြီး Encapsulating & polymorphism ဆိုတာဘာလဲ.အဲဒါတွေကို ရှေ့ပိုင်းက အခန်းတွေနားမလည်ဘဲသင်လို့ရပါသလား။အဲလို တဆင့်ချင်းကို ခေါင်းစဉ်တွေ guideline လေးချပေးစေချင်တာပါ။ခေါင်းစဉ်တွေ့သမျှဖတ်တော့ သေချာလဲနားမလည်ဘူးလေ.ဘယ်လိုလေ့လာသင့်တယ်ဆိုတာကို အကြံပေးစေချင်ပါတယ်။
နားလည်သလိုပြောမိလို့ အမှားပါရင် တောင်းပန်ပါတယ်။
အင်း အဲဒါက အဓိကပြဿနာက Programming ကို Java နဲ့စသင်တာဖြစ်နေလို့ ခက်နေတာပါ အရှေ့ပိုင်းတွေက ဘယ် Language မဆိုလေ့လာရင် သင်ရမယ့်ဟာဖြစ်နေတော့ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ နောက်ပိုင်းက Object Oriented Concept တွေဖြစ်လာလို့ နည်းနည်းခက်နေတာပါ အဲဒါတွေကို နားလည်ချင်ရင် တစ်ခြားစာတွေကို ဖတ်ရပါတယ် အဲဒါမှ ဘာဆိုတာသိပါလိမ့်မယ် Object Oriented Concept နားလည်မှသာ Implementation တွေကိုနားလည်ပါလိမ့်မယ် အောက်မှာပြထားတဲ့ လင့်တွေကလိုစာတွေကို ရှာဖတ်ပါဦး။
မှန်လိုက်လေ... ဗေဒင်ဆရာလား မှတ်ရတယ်နော်.. ဟီးဟီး
Programming ကို Java နဲ့စသင်ခဲ့တာဆိုပေမယ့် C++ မှာတုန်းက သိပ်နားမလည်ခဲ့လို့နဲ့တူတယ်။
နောက်ပိုင်းဆက်လေ့လာဖြစ်နေတာက Java ကိုပဲဆိုတော့.. အဲမှာလည်နေတော့တာပဲ။
အခုလို အမှန်တည့်ပေးတဲ့အတွက် လမ်းညွှန်ပေးတဲ့အတွက် အထူး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကြိုးစားဖတ်လိုက်ပါ့မယ်.. မသိတာတွေရှိလဲ မေးပါဦးမယ်လို့..